' गजल लेखनमा भीषण विवाद छ'- सरस्वती 'सरु'
पुष २८, २०७५ मनु बिद्राेही
गजलकार सरस्वती सरु
गजलकार सरस्वती सरु विगत सात वर्षदेखि साहित्यमा सक्रिय रही साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाइरहनुभएकाे छ । रेडियोमा अरूकाे सिर्जना सुनेर प्रभावित भएपछि उहाँलाई साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिलेकाे हाे । उहाँले गीत, गजल, कविता र मुक्तक लेख्नुहुन्छ । हातेमालो साहित्य सगम (काभ्रे शाखा)को सक्रिय सदस्य र सुस्केरा साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध गजलकार सरस्वती सरुसँग मनु विद्राेहीले गरेकाे कुराकानी
मनु :-तपाईं आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ?
सरु :- त्यत्ति धेरै व्यस्त त छैन । अलि अलि घरायसी काम, अलि अलि साहित्यिक कार्यक्रम र पुस्तककाे अध्ययनमै दिन बित्दैछन् हिजोआज मनु जि ।
मनु :- तपाईंको विचारमा साहित्य के हो? केको निम्ति साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ?
सरु :- साहित्य भन्नाले समाजमा घटिरहेका विकृति, विसङ्गति र समाजमा जो देखिएका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षलाई शब्द माफर्त अाैल्याउने काम नै साहित्य हो । साहित्य वा काब्य कुनै न कुनै कारणले रचना गरिन्छ । समाजका सबलता पक्षहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रा कामलाई सहि मार्ग देखाउनको लागि म साहित्य सृजना गर्ने गर्छु ।
मनु :- तपाईंले सुरुवात गर्ने बेलाकाे साहित्य र अहिलेको नेपाली साहित्यमा के भिन्नता देख्नु भएको छ?अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थिती बारे कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ?
सरु :- मनु जि! पहिले र अहिलेको साहित्यमा फरक नै पाएको छु । तुलनात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने पनि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै नै साहित्यको विकास भएको छ । अहिले समय समयमा स्रष्टा र सर्जकहरुको रचना सुन्ने सुनाउने काममा संस्थाहरु सक्रिय छन् ।
अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थिति हेर्दा धेरै मात्रामा सर्जकहरु साहित्यमा प्रवेश गरेकाे देखिन्छ । साहित्यलाई मन पराएकाे देखिन्छ खुसी लाग्छ ।
जो भर्खरै भर्खरै साहित्यमा खुड्किला राख्नु भएका सर्जकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले चाहिँ साहित्यलाई अलिकति बुझेर, साहित्यको नियमलाई बुझेर आइदिँदा राम्रो हुन्छ । किनभने साहित्य सृजना गर्दा भाषा,नियम, नबुझी लेखिदिँदा ह्रस्व, दीर्घ शब्दको अर्थ नबुझिदिँदा साहित्यलाई असर परेको देखिन्छ ।
मनु :- पुरुष लेखक भन्दा नारी लेखकको संख्यामा कमि देखिनु र पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखक पछाडि पर्नुको मुख्य कारण के होला?
सरु :- संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पुरुष लेखककाे तुलनामा नारी लेखक कम होलान तर अहिले पछिल्लो समयमा महिला लेखकहरु पनि सशक्त ढंगले लेखिरहनु भएकाे छ । महिला लेखक पछाडि पर्नु भएको छ जस्ताे मलाई लाग्दैन । यदि महिला लेखक नै पछि पर्नु भयो भने महिला अधिकारकाे बारेमा कस्ले लेख्ने त ? मनु जि तपाईं ढुक्क हुनुहाेस् महिला लेखक कहिल्यै पनि पछि पर्दैनन् ।
मनु :- हाल विकास भएको सुचना प्रविधि र यसले नेपाली साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ?
सरु:- मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुनसुकै कुराको पनि फाइदा सँगसँगै बेफाइदा पनि उत्तिकै हुन्छ ।अहिले हाम्रो युग भनेको सुचना र प्रबिधिकै युग हो । यो युगले नेपाली साहित्यलाई सकारात्मक नकारात्मक दुबै प्रभाव पारेको जस्तो लाग्छ ।किनभने अहिले सामाजिक संजालले गर्दा कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो कार्यक्रम भैरहेको छ, कुन ठाउँमा कुन किसिमको गतिविधि सच्चालन भएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।अग्रजहरुको सृजना सुनेर,हेरेर, केहि नयाँ नयाँ ज्ञान लिन सकिन्छ यस्को सकारात्मक प्रभाव भयो भने यसका साथसाथै सुचना प्राविधिले नेपाली साहित्यलाई नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ ।
यदि महिला लेखक नै पछि पर्नु भयो भने महिला अधिकारकाे बारेमा कस्ले लेख्ने त ? मनु जि तपाईं ढुक्क हुनुहाेस् महिला लेखक कहिल्यै पनि पछि पर्दैनन्
जुनसुकै स्रष्टा र सर्जकको अलि राम्रो लागेका सृजनाहरु कपि गर्ने, चोरी गर्ने अरुको सृजनालाई आफ्नो भनेर कपि गर्ने गरेको पाइन्छ ।यस्तो गर्नु भनेको नराम्रो काम हो । किनभने यस्लाई बौद्धि क सम्पत्ति चोरी पनि भन्निछ । कसैको बौद्धिकता चोरेर आफ्नो भन्नु पनि राम्रो हाेइन । अर्को कुरा कतिपय सर्जकहरु लाईक रकमेन्टक लागि पनि राख्ने गर्छन् , यस्ले गर्दा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।
मनु :- साहित्यलाई समाजको ऎना मानिन्छ,कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा जोड दिने हो भने समाज परिवर्तनको लागि सहयोग पुग्ला ?
सरु :- पक्कै पनि साहित्यलाई समाजको एेना भनिन्छ । सामाजमा भएको विकृति विसङ्गतिहरुलाई साहित्यले नियालिरहेको हुन्छ । समाजको यथार्थ चित्रण साहित्यले गर्छ साहित्य सृजना गर्नु, साहित्य लेखनकाे लागि भावना फुर्नु भनेको समाजलाई राम्रोसँग चिन्नु हो । समाज र साहित्य भनेको एक अर्काको परिपुरक हुन् ।
समाजको राम्रा र नराम्रा पक्ष चित्रण गर्न साहित्य चाहिन्छ, साहित्य सृजना गर्न समाज । समाजको प्रगति गर्नको लागि समाजमा घटिरहेका नराम्रा घटनाहरुलाई शब्द मार्फत व्यक्त गर्न सकियो भने समाज परिवर्तनको लागि सहयोग पुग्ला ।
मनु :- साहित्यमा राज्यस्तरबाट कस्तो कदम चालिदिए राहत महशुस गर्न सकिएला?
सरु :- साहित्यकार अार्थिक हिसाबले सधैँ नै पछि परेकाे देखिन्छ । लेखकलाई राज्यस्तरबाट केही सहयाेग भएकाे पाइँदैन । राम्रा लेख्ने लेखकहरू लेख्न छाडेर हातमुख जाेड्नका लागि अन्यत्र लाग्नु परेकाे छ । राज्यले लेखकहरूलाई केही लेखकाे पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्‍यो भने राहतकाे महशुस गर्न सकिएला मनु जि ।
मनु :- आजभोलि नेपाली साहित्यमा आगन्तुक शब्दहरू बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ यस्तो प्रवृतिले के कस्तो असर पर्न सक्छ?
सरु :- हाे मनु जि याे प्रवृत्ति नेपाली साहित्यमा निकै जटिल समस्याकाे रूपमा प्रस्तुत भएकाे छ । यसै गरी अागन्तुक शब्द अाइरहने हाे भने नेपाली साहित्यमा अागन्तुक शब्द प्रतिस्थापन भई झर्रा ठेट नेपाली शब्द हराएर जान नसक्ला भन्न सकिन्न ।
मनु :- साहित्यका प्रायःजसो सबै विधाहरु विवादित बनेको छ, यस्तो अवस्थामा साहित्य क्षेत्रमा रुचि भएकाहरूलाई र साहित्यमा प्रवेश हुन चाहनेहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ?
सरु :- साहित्यका प्रायजसो सबै बिधाहरूमा विवाद नै देखिन्छ । गजलको कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र गजल र बहरे गजलकाे विषयमा भीषण विवाद देखिन्छ । एक तर्फ बहरमा गजल लेख्नेहरुले बहरमै गजल लेख्नुपर्छ त्यस्को सूत्र, मिटरको कुरा ह्रस्व दीर्घ मिलाएर लेखेका गजल मात्र गजल हुन्छन् भन्ने अाशय प्रकट गर्छन् भने अर्काथरिले गजल स्वतन्त्र लयमा पनि लेख्न सकिन्छ । स्वतन्त्रमा गजलमा बढी भाव अटाउन सकिन्छ, बहरमा बाँधिएर लेख्नुपर्ने हुँदा भावलाई सरल तरिकाले अटाउन सकिँदैन भन्ने राय प्रकट गर्दछन् ।
कविताको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै खालको विवाद देखिन्छ । त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहान्छु भने गजलमा अब्बल खालकाे भाव हुनुपर्छ । जसले सहजै पाठककाे मन जित्न सकाेस् । भाव भबएन भने बहर र स्वतन्त्र दुबै गजल हाेइन । यदि अब्बल भाव छ भने बहरमा लेखे पनि बेबहरमा लेखे पनि दुवै गजल हुन् ।
मनु :- अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केहि बाकी छ कि?
सरु :- खासै त्यस्तो केही छुटेको जस्तो लाग्दैन l सबैले साहित्यलाई सम्मान गरौँ, माया गरौँ । साहित्यको उस्थानको लागि सबै जना जुटौँ । पुस्तक पढ्ने बानि बसालौँ भन्न चाहान्छु ।
शनिवार, पुष २८, २०७५, ०९:०१:००